Gabar Somaliyeed oo lagu Weraaray Dalka Canada Sabab ? – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2017 7:17 b 0
Gabar Soomaali ah ayaa lagu weeraray Magaalada Edmonton ee Dalka Canada kaddib markii tobaadkan Nin Soomaali ah uu dhaawacay shan Qof isaga oo gaari jiirsiiyay.
Nuurto C/Raxmaan oo wadatay Gaari ayaa waxaa istaajiyay Nin caddaan ah,waxaana uu u geystay Aflagaaddo iyo isaga oo ku yiri “waxaad tahay Argagixiso waana in aad u laabataa dalkaagii”.
Booliska Edmonton ayaa sheegay in Cabdullahi Xasan Shariif oo 30 Jir ah uu Gaari dardarsiiyay koox dad ah islamarkaana shan qof dhaawac u geystay.
Waxaa kale oo ay sheegeen in Shariif Gaariga uu watay laga helay Calanka Ururka Daacish ee Ciraaq iyo Syria ka dagaallama.
Urur u dooda xuquuqda aadanaha oo ka dhisan Edmonton ay soo gaartay 2 farriin oo Cabasho ah kana timid Haween Muslim ah oo ka cabanaya Ragga aan Muslimka ahayn ee Canada.
Laamaha Amaanka Baydhabo iyo Odayaasha oo Kulan kuyeeshay baydhabo